छातीमा गो लि था प्न तयार छौ तर काठमाडौं बासीलाई मे लम्चीको खानेपानि दिदैनौ, हे(भिडियो हेर्नुहोस्) – List Khabar
Home / समाचार / छातीमा गो लि था प्न तयार छौ तर काठमाडौं बासीलाई मे लम्चीको खानेपानि दिदैनौ, हे(भिडियो हेर्नुहोस्)
छातीमा गो लि था प्न तयार छौ तर काठमाडौं बासीलाई मे लम्चीको खानेपानि दिदैनौ, हे(भिडियो हेर्नुहोस्)
admin June 24, 2021 समाचार Leaveacomment 62 Views
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई हामी सबै परिवारले नै भोट दिएको हो । तर उहाँ वाढी पीडित वस्तीमा आउनुभयो तर हेलम्बुमा आउनु भएन । अप्ठेरो परेको बेलामा हामीलाई हेर्न पनि आउ नु भएन निकै दुख लाग्यो । हामीलाई अप्ठेरो पर्दा सरकारले पनि हेरेको छैन । यति धेरै क्षती भएको छ हेलिकप्टर आउँछ केही पोका चाउचाउ ख सालेर जान्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले अब कुन नेतालाई भोट किन दिने ?
अब काठमाडौबासीले मेलम्चीको पानी खाउँला भनेर नसोचे पनि हुन्छ । मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण आफ्नो सर्वश्व गुमाएका स्थानियको यो आ क्रो श हो । अहिले हामीले चेतावनी दिएका छौं यस्तै वेवास्ता भयो भने हामी नि र्णयनै गर्न बाध्य हुनेछौं । आफ्नो पुर्खा देखि दुख गरेर जम्मा गरेको सबै सम्पत्ती सकिदा पनि सरकारले वास्ता नगरेका कारण उनीहरु आ क्रो शित भएका छन् ।
हेलम्बुमा राहत नपुगेको खबरपछि केहीले हेलिकप्टरमार्फत सहयोग पुर्‍याउन थालिएको भएपनि त्यो ब्यवस्थित हुन सकेको छैन । राहत ल्याउनेहरुले मनपरी गर्न थालेको स्थानीयको आ रो प छ। नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका हस्त पण्डितले आइतवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हेलिकप्टरमा आएको राहतमाथि प्रश्नसमेत गरेका छन्।
हाम्रो पीडा हाम्रो ठाउँमा छ तर यो नाटक किन रु सहयोग गर्न आको कि बाढी पर्यटन हेर्न आको रु १० थान पी फोम, १९ बाकस चाउचाउ, २ पकेट पियुस, ३ पकेट जीवनजल र ३ पकेट मास्कको पैसा कति र हेलिकप्टर भाडा कति ? उनले प्रश्न गरेका छन्।
Previous भोलि देखि सार्वजनिक यातायात खुल्ने
Next ब्लड प्रेसर लो भएमा के गर्ने ? अपनाउनुहोस् यी ६ उपायहरु ।